फिल्म निर्माण र प्रदर्शनीको तयारीमा निर्माता तथा निर्देशकहरु – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ आश्विन २०७७, आईतवार ००:४९ English
फिल्म निर्माण र प्रदर्शनीको तयारीमा निर्माता तथा निर्देशकहरु
काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण जारी लकडाउन गत मंगलवारबाट अन्त्य भएको छ । तर, संक्रमण दिन-प्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ ।
लकडाउन खुलेसँगै सार्वजनिक सेवाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । सार्वजनिक यातायातदेखि बजार-पसलहरु खुलेका छन् । कोरोनाबाट अतिप्रभावित फिल्म क्षेत्रमा भने प्रतिबन्ध कायमै छ । सरकारबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्म फिल्म क्षेत्रमा कुनै प्रकारका गतिविधि हुने छैनन् । अरु क्षेत्र खोलेर यो क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको फिल्मकर्मीले विरोध गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले फिल्म क्षेत्र चलायन बनाउन फिल्म निर्माण र प्रदर्शन खुल्ला गर्ने विषयमा सरकारमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । सरकारले फिल्मी क्षेत्रको निर्माण र प्रदर्शनी कहिले देखि खुल्ला गर्ला एकिन नभएपनि निर्माता तथा निर्देशकहरु फिल्म निर्माण र प्रदर्शनीको तयारीमा जुटेका छन् ।
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार ०६:५२ मा प्रकाशित